I-China eChongiweyo yeLogo eprintiweyo yeeBhokisi zeZipho zeKhadibhodi ngeRibhoni yoMvelisi kunye noMthengisi | Huaguang
Iibhokisi zeKhadibhodi yeZipho eziPrintwe ngeVenkile eQhelekileyo ngeRibhoni
Ibhokisi yeZipho zePhepha
Ubukhulu: 18 * 16 * 13cm
Uhlobo lwePhepha: Ibhodi yebhodi
Iinkcukacha zokupakisha: ii-pcs enye kwi-polybag okanye kwimfuno yakho
Est. Ixesha (iintsuku) 15 20 Kuya kuthethathethwana
Ukuprinta, ziintlobo ngeentlobo zeemveliso eziprintiweyo, phantse zigcwele iimpahla zabantu, ukutya, izindlu, ukuhamba endle, kwaye ubomi babantu busondele kakhulu. Nguwuphi umlinganiso webhetshi yamalungu aphilayo? Ayisiyiyo kuphela ukubona ukuba umbala wokuprinta uhambelana neemfuno, kodwa ikwakhona ukubona ukuba le bhetshi ye-inki ephilayo izinzile na. Namhlanje, ngokusekwe kule bhokisi yesipho, ndingathanda ukwabelana nawe ngezinto ezininzi ezinefuthe kuzinzo kumbala we-inki:
Iziphumo ezibonakalayo zombala we-inki yenye yezinto ezibalulekileyo ukulinganisa umgangatho wento eprintiweyo. Umbala we-inki, umbala ochanekileyo noqaqambileyo kunye nombala ongaguquguqukiyo ziimfuno ezisisiseko kumgangatho wezinto eziprintiweyo. Ukuqondwa ngokuchanekileyo komgangatho wokuprinta umbala we-ink kubaluleke kakhulu kulawulo oluchanekileyo lokuprinta umbala we-inki kunye nokuphuculwa komgangatho wokuprinta kweemveliso zokuprinta umbala.
Ukugcina ubushushu kunye nokufuma rhoqo kubaluleke kakhulu ekuqinisekiseni uzinzo lweinki. Ukuprinta ngexesha lasehlotyeni, ngenxa yeqondo lobushushu elikwindawo ephezulu, ngoko ke ukuprinta kokuhambisa inki ngokulula ngakumbi, kunye nokonyuka kwexesha lokuprinta, ukuprinta inki yokunyusa ixabiso, phantsi kwemeko ye-inki efanayo, umgangatho wokuprinta i-inki iyakhula nzulu, ke kwinkqubo yokuprinta ukufumana umqondiso woxinano, rhoqo xa kuthelekiswa nesampulu esayiniweyo, ukuba kukho imfuneko inokucuthwa ngokufanelekileyo isixa se-inki, ukuprinta nokusayina umbala wesampulu.
Ebusika, njengoko iqondo lobushushu lilonke elisezantsi liphantsi, iqondo lobushushu lazo zonke iindawo zomatshini liphantsi xa umatshini uqalwa kusasa. Abaqhubi bokuprinta kufuneka benze la manqaku mabini alandelayo ngaphambi kokuqala ukushicilela.
Okokuqala, phucula ubushushu kunye nokufuma kumasifundisane ukuyenza ifike kumgangatho (ubushushu yi-20 ~ 24 ℃, ukufuma ngama-60% ~ 70%).
Okwesibini, inki yobushushu okanye ukongeza izongezo okanye inki kwi-inki, ukunyusa ukuhamba kwe-inki, emva koko uqalise.
Ukulungiselela ukhuselo lokusingqongileyo, le bhokisi yesipho igcina umbala wezinto ezisetyenzisiweyo, ngenxa yoko amaqondo obushushu anefuthe elincinci okanye elingenantsingiselo kuwo.
Kule mihla uninzi lweeprinta luthathe inkqubo yohlobo oluzenzekelayo lwemfundo, kodwa kuguqulelo ngesandla longeze umatshini wokushicilela ulwelo umshicileli ufuna abasebenzi basebenzise inguqulelo yemfundo elungileyo ngaphambi kokuqala, kungenxa yokuba inkqubo yokuprinta ukongeza amanzi notywala kunye netanki lamanzi embindini Amathafa ezinye iintlobo zemfundo kwiqondo lobushushu kunye noxinzelelo zazingafani, kulula ukubangela ukuprinta okungcolileyo, kodwa ukuba ufuna ukususa imdaka edadayo yokunyusa ubungakanani bamanzi, amanzi e-inky aya kwanda kwaye abe lula.
Ukongeza, isisombululo somthombo kufuneka sihlangabezane neemfuno zokuprinta, ezinokulinganiswa ngephepha lovavanyo lwe-pH okanye imitha yoxinaniso. Ukuba uxinzelelo lukhulu kakhulu, i-inki kuyo nayiphi na imeko nayo ayizifezekisi iimfuno, kwaye i-inki iya kulungiswa ngokukhawuleza; Kwaye ukuba uxinano lincinci kakhulu, isixa samanzi esongezwe kwindawo enkulu yokudada engcolileyo iya kupheliswa, kwaye nje ukuba ukukhawulezisa ukushicilela, ukungcola okungcolileyo kuya kuvela ngokulula kwindawo yomlomo, ukwanda kwe-inki yamanzi kuya kuba nzulu, Ukwenza umjikelo okhohlakeleyo, ukwenza uzinzo kumbala weinki akunakulawulwa.
Lawula inani leinki
Ukuqala ngaphambi kokushicilela kubaluleke kakhulu. Emva kokuba umbala we-inki uhlengahlengisiwe, isampulu yokuprinta esemgangathweni, ekwabizwa ngokuba sisampulu yomsayino, kufuneka iprintwe kuqala, emva koko ixhonywe kwitafile yesampulu.
Oku kufuna ukuba senze ezi zinto zimbini zilandelayo ngaphambi kokuprinta:
Okokuqala, ngaphambi kwe-inki yokunciphisa ubungakanani bamanzi, kuba ubume boxinaniso obahlukileyo bohlukile, isidingo samanzi siya kwahluka.
Okwesibini, uxinano lwentsimi lwebha yesiginali kufuneka lube ngaphakathi kuluhlu oluqhelekileyo (kwimibala emine yokuprinta, Y ngu-0.85 ~ 1.10, M ngu-1.25 ~ 1.50, C ngu-1.30 ~ 1.55, K ngu-1.40 ~ 1.70).
Isizathu sokuqinisekisa la manqaku mabini angentla kukuba ukuba isixa se-inki senxalenye yokugqibela yokugqibela sikhulu kakhulu, kwaye indawo ekhoyo ngoku incinci kakhulu, kwaye amanzi awancitshiswa kwangaphambili ngaphambi kokuba i-inki ibekwe, umbala utyikityo ayingombala we-inki oqhelekileyo konke konke, kwaye unyanzelekile ukuba atshintshe ngexesha lokuprinta. Kwaye ke inani le-inki kulwakhiwo aluyi kuhamba, liza kukhula kancinci kuluhlu kwaye ngokuthe ngcembe linyuse i-emulsified, kwiroller yamanzi emva kokungcola okudadayo kunzima ukuphelisa, kunye nokuprinta kwinto efanayo yokutshiza umgubo kuya kuba kunamathele. Abasebenza ngokujikeleza i-inki ukujikeleza okwenzeka xa isandi sika "yi yi", okanye i-inki roller inking kunye ne-shiny inokugweba imeko.
Ke umphathi wecandelo lokuprinta ngaphambi kokuba utyikitye isampulu kufuneka enze umkhwa olungileyo wokuncitshiswa kwamanzi, kuqatshelwe kwinkqubo yokusebenzisa uguqulelo lwephepha kunye ne-inki yomlomo we-diao ubukho be-tinting, kude kube kukonyuka kwamanzi ngokuthe ngcembe kuphelisa ukungcola okungcolileyo, emva koko umqondiso Ubuninzi buhambelana nomgangatho, i-inki ihambelana nentsingiselo yokwenene, "nge-inki encinci eprintiweyo esemgangathweni kunye nobuncinci bokuprinta amanzi" ithiyori, oku kuya kuba lula ukwenza uzinzo lwe-inki, kulula ukuyilawula.
Kwangokunjalo, le bhokisi yesipho ayinalo ushicilelo, kodwa singenza ngokwezifiso iibhokisi zezipho ezahlukeneyo ngokweemfuno zabathengi, iintlobo ngeentlobo zebhokisi kunye nemibala etyebileyo, ukushicilela ngokungqongqo jonga umbala we-inki, yimveliso yokugqibela yolwaneliseko lwabathengi iimeko eziyimfuneko zebhokisi yesipho.
Eli nqaku lihamba ngozinzo lwe-inki kuyo yonke, kuba kuphela kwiphepha elizinzileyo le-feida phantsi kwesiseko sozinzo, umbala unokuhlala uzinzile. Ukuba ukondla kunye nohlengahlengiso olungalunganga, imoto engenanto kunye nekruqulayo, kwaye zombini zinokubangela ukuba i-inki ingazinzi, iya kumosha iphepha elininzi, kwimeko yephepha elikhulu elinombane (iphepha ngokubanzi lingaphantsi kwe-100 g / m2), kulula ukuvela i-punch elawulayo kunye nephepha kunokulinda into ethile, kuya kufuneka icinge ngenye indlela yokunyusa ukufuma komoya, okubekwe ngaphezulu kwesondlo sephepha le-feida, ukuphelisa intonga yesinyithi ye-electrostatic ukwenzela ukuphelisa umbane ongashukumiyo wephepha.
Umgangatho wamalungu aphilayo uyahluka, kwaye umshicileli unokuba nee-inki ezintathu okanye nangaphezulu zomatshini wokushicilela (iindawo ezingafuneki kangako zihlala zii-inki ezingabizi kakhulu, ngelixa ezibiza kakhulu zingeniswa). UCaptain ekusebenziseni kwabo iimpawu ze-inki banokuqonda okunzulu kunye nokulawula.
Njengeinki eyomileyo ekhawulezileyo kwimeko yabathengi njengexesha lokuphumla okanye ixesha lekhefu ixesha elide, elomileyo ngokukhawuleza, inki yokuprinta iyakuthumela ukukhanya kwakhona, kwaye ngexesha elahlukileyo, iimeko zobushushu ezahlukeneyo, i-inki iya kubonisa viscosity eyahlukileyo, ke umphathi wenqwelomoya kufuneka kwintsebenzo eyahlukileyo ye-inki, i-doping okanye i-adjuvant eyomileyo, okanye ngokulawula ubushushu kunye nokufuma ukulawula i-ink viscosity.
Abavelisi abaninzi bavelisa ii-inki, kodwa sithenga ii-inki zohlobo. Iibhokisi ezininzi zezipho zisebenzisa umbala wepatone kuyilo lwazo. Eminye imibala ithambile kwaye iya kuvelisa umahluko wemibala ngokotshintsho lwendalo.
Umgangatho wephepha udlala indima ebalulekileyo kuzinzo lwe-inki yokuprinta. Ukuba uhlangabezana nomgangatho ombi, kulula ukulahla iphepha, nokuba ungalawula njani, awunakugcina uzinzo lweinki. Kwimeko apho iphepha lingenakutshintshwa, kuya kuthathwa la manyathelo alandelayo.
1) Sula amacala ephepha ngelaphu elimanzi ukususa umphetho woboya bephepha obubangelwa yimela yokusika engacacanga.
2) ukongeza isixa esifanelekileyo sezongezo kwi-inki iya kususwa, ukuze i-viscosity incitshiswe, i-inki kwingubo yokuncamathelisa iphepha iya kuba ngcono.
3) Xa inani lamalungu aphilayo likhulu, ukulandelelana kombala okuguqulweyo kuyaqwalaselwa (ngaphandle kokuchaphazela umbala wokugqibela). I-inki encinci ibekwa ngaphambili kwaye i-inki enkulu ibekwe kwiqela lombala ongasemva. Ngale ndlela, xa iqela lokuqala okanye lesibini lephepha liprintwe nge-inki encinci kwaye kubekwe isikrini esikhanyayo, imeko yokulahleka kweenwele kumphezulu wephepha iya kuphuculwa kakhulu.
4) Nciphisa uxinzelelo lokushicilela, cwangcisa ngokufanelekileyo amaxesha okucoca ngengubo, emva kwengubo nganye yokucoca, ubeke iphepha elininzi (akukho cala lokujonga lijongileyo) lokuprinta kwetyala, eliza kudlala indima ebambekayo kwinkqubo yokuprinta elandelayo ye-inki elula ukuba izinga lokulahlwa liyancipha.
Kwangokunjalo, ibhodi yamaphepha kunye nephepha lekraft elisetyenziswe kule bhokisi yezipho zithengwa ngumenzi obesebenzisana nathi iminyaka emininzi. Umgangatho wephepha awubonakali ngaphandle, ngakumbi ibhodi engwevu, ujongeka ulungile ngaphandle, kodwa eyona nto iphambili kakhulu. Ke sithenga kuphela izinto ezingavuthiweyo kubavelisi esibathembileyo. Emva kwayo yonke loo nto, ngokudodobala kwemo engqongileyo, ukuqonda kwabantu ngokhuseleko lokusingqongileyo kuya kusomelela. Kuphela ziibhokisi zezipho ezisemgangathweni ezifanelekileyo ukuthunyelwa kubahlobo nakwizihlobo.
Uyilo lombala woqobo.
Gcina umbala wokuqala webhokisi yesipho, ulunge ngakumbi kwindalo.
Akukho hlulo ngaphakathi kwebhokisi yesipho, ke unokubeka izipho naphina apho uthanda khona.
Egqithileyo Amanzi angenawo manzi, ukukhanya kwefilimu okanye iileyibhile zokushicilela ze-matte ezinemigca
Okulandelayo: Ibhokisi yamaphepha okhathalelo lolusu ifakwe kunye nebhokisi yohlobo lwePVC
Iibhokisi zokugcina ezihombisayo
Yenziwe ngeplastiki yeti yokupakisha ibhokisi yeelekese ...
Ukuphinda usebenze ngokuQinisekiswa kweKhadibhodi yePhepha leRose Flower ...
Ukuprintwa kweebhokisi zebhokisi yezipho
isikwere esimise isikhafu isikhafu seKrisimesi ngemibono yobugcisa ...
Iimveliso ezintsha ezinqabileyo zentengiso ethengiswe ngokutsha ...
Yoshicilelo yobungcali ecwebezelayo isipho pac ...